Fahagagana Farm lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Fahagagana Farm lalao
Online lalao Miracle Farm, toerana izay ny tany tsy mitombo na inona na inona. Dia ilaina ny handrava ny voninkazo mananasy ambanin'ny zana-kazo farafara zana-kazo dia nampisotro raha vao tonga ny fotoana mba hojinjaina lafo vidy. Raha ianao, dia ho afaka ny hilalao, fa mahazo ny sasany denezhek afaka virtoaly. Lasa mahay sy mafy-miasa maro be, tsy afaka mitombo fotsiny sakafo sy hanangana biby, fa koa ny fandraisana ny akora ho vokatra vita izay dia mora ny mivarotra lafo vidy kokoa. Hianatra sehatra isan-karazany, ary na dia ao amin'ny ranomandry mandrakizay hanorina toe-karena vaovao. Ary inona moa no mba manao zavatra bebe kokoa mba hilaza aminareo ny lalao mihitsy.
Lalao Miracle Farm tamin'ny Category:
Games HATSARAO FOANA
Ny tsara indrindra Fahagagana Farm lalao
Me sy ny ampondra
Famonjena amin'ny kakao Farm
Ny voany ny saha
Dora mamonjy ny toeram-pambolena
Toeram-piompiana Frenzy - Pizza Party
Misambotra ny akoho, raha azonao atao
Sakana ho an'ny lambo
Dress ny soavaly
Famonjena amin'ny toeram-piompiana ny sokola
Ny ady eo amin'ny toeram-piompiana
Rapunzel: Neny tao amin'ny saha
Ilay sipakely eo amin'ny toeram-piompiana
Afa-mandositra ny vorontsiloza toeram-piompiana
Tantsaha ny Fire
Farany Fahagagana Farm lalao
Mamafy Season: Faharoa 2
Riley ny Farm
Kid sy ny fambolena daisies
Tontolon'ny zavamaniry ao Aostralia Farm
Fialofana any an'ala
Afa-mandositra ny toeram-pambolena traktera
Pony no Malishko
Little bunny zaridaina
Afa-mandositra ny sompitra eo amin'ny toeram-piompiana
Ankehitriny dia afaka hitombo manan-karena vokatra nandritra ny lalao fahagagana toeram-pambolena an-tserasera
Lalao Online Rehetra Fahagagana Farm lalao
ny ody ny fiainana eny ambanivohitra
Eny ary, farany, lohataona nanova ny andro mangatsiaka, ary tsy ho ela ho ahi-maitso, mamelana voalohany tsiry, voaroy hiseho, ary avy eo ny vokatry ny hazo fihinam-boa, dia vokatra ny legioma. Ny mifoha avy aorian'ny hifohazany, ary te kokoa ny vakansy mba handeha ho any amin'ny tanàna ny renibeny, izay izy no hiandry mofo amin'ny cherries, ranoka paoma, ny salady ny vokatra avy amin'ny saha sy ny zava-pisotro mpivady ronono ny zafikely alona vitaminina, hanatsarana ny fahasalamana sy ny tsimatimanota, browned amin'ny masoandro. Ho afaka nihazakazaka nidina ho any amin'ny ony ny milomano, mitsambikina bungee sy ny trondro. Mampamaky loha velona ao an-tanàna.
Tsy maninona marina izany! City ankizilahy sy ankizivavy tsy tonga saina ny fomba sarotra ny fiainan'ny mpamboly iray. Mba hitombo ny akoho akoho, tsy mamela azy ho faty ny hatsiaka, aretina sy ny faladiany saka, dia mila miezaka mafy. Tsy maintsy ho faly amin'ny fahamarinana sy kolokoloina, mba hiandry eo amin'ny ahi-maitso ho an'ny vorona dia salama tsara. Toy ny am-polony maro toy izany akoho, manaraka rehetra efa sarotra, ary afa-tsy ireo tototry ny asa.
tao amin'ny saha dia tokony ho fotoana mba hamafy voa sy ny zavamaniry zana-kazo, ka nanam-potoana mba hojinjaina ara-potoana. Toy ny fitomboan'ny vokatra maso, dia mila ny ahi-dratsy, ny rano, nandrava hanimba zavatra, hamatotra ny taho ka tsy tapaka, zezika ny zavamaniry. Matotra haingana ny sasany, ny hafa miadana ary mila hanangona ny vokatra dospevshy ny fandraisana azy, mba hisorohana ny Helodrano. Ary izany no tsotra fotsiny zaridaina, kanefa rehefa tonga any amin'ny toeram-piompiana – lehibe raharaham-barotra, miaraka amin'ny sahiratsy sy ny karohy tsy hiatrika. Mila manokana teknika izay handray ny asa sarotra sy ny taom-pijinjana fikarakarana akaikin'ny fambolenay.
Fampidirana ho any amin'ny tanàna fomba fiainana noho ny nataon'ny toeram-piompiana fahagagana Lalao
Miracle Farm ny lalao an-tserasera ianao dia tsy ho reraka ara-batana ary na dia voly, nefa mbola ho tonga saina ny fomba mora ny hanana toy izany raharaham-barotra.
Izany dia manomboka amin'ny kely sombin-tany ary mampahatsiahy smallholding ao an-tanàna.
Avy lisitra ny mahazatra ihany no fitaovana – angady, karohy, sahiratsy, scythe sy ny siny mba hitondra ny rano avy amin'ny lavaka fantsakana ho fitarihan-drano. &Nbsp;
Raha mbola ianao tsy manam-bola mihitsy, dia afaka mow ny ahitra ka mivarotra izany amin'ny mpiara-monina toy ny Feed ho an'ny biby. &Nbsp;
Raha manomboka miseho voalohany ao am-paosinao vola madinika, tonga ny fotoana mba mieritreritra ny hividy legioma, ary tena takatry, nefa izany kôkômbra, voatabiha.
Ary ianao mahazo vola amin'ny fivarotana lehibe noho ny an'ny hay, ary izany no zavatra.
Next, mihoatra. Ao amin'ny toerana ny voatabiha Mamy ny vary, radishes, tanamasoandro, sy ny sisa. Fa tsy manapa-kevitra izay namboly sy ireo lasibatra ny zavatra ilain'ny ny tsena, izay hita taratra ao amin'ny mety tsanganana eo amin'ny solaitrabe. Ho ny asa, ary tsy maintsy mitondra izany andraikitra, tsy te ho very amin'ny dingana voalohany, noho ny tsy rariny mafy loha.
Ary rehefa nandroso ny varotra fifandraisana
Fijinjana hanaiky taloha teo amin'ny trano fanatobiana entana, ary avy eo ho any an-tsena, izay lalàna henjana handresy ny fifandraisana ara-barotra. Asio fifaninanana vidiny, ary raha tampoka ianao mandray ny tolotra mba hividy izay tsy izany, dia afaka mividy izany amin'ny mpivarotra hafa amin'ny vidiny ambany sy hivarotra kokoa ny mpividy.
Fa ny tena raharaham-barotra mandeha rehefa ho maharitra mpividy. Ho nanolotra ny fifanarahana ho an'ny sasany ny fanomezana ny vokatra amin'ny toeram-pisakafoanana, toeram-pivarotana, trano fandraisam-bahiny ny nahandro. Izany no dingana manan-danja hatrany, fa andraikitra be koa.
Tsy ho very maina ny hanadino ny fijinjana, na handringana azy nisotro rano tsy ampy tahaka anao ho kivy sy, araka izany, no dingana voalohany indray ny asa. Fa raha tsy tapaka milalao ao amin'ny toeram-piompiana fahagagana lalao an-tserasera, dia afaka handemana ny toetra sy ho lasa tena nanan-karena tantsaha.